ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး လမ်းမတော်လသာကျောက်တံတားပန်းပဲတန်းပုဇွန်တောင်အလုံကြည့်မြင်တိုင်စမ်းချောင်းဗဟန်းဗိုလ်တထောင်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်တာမွေရန်ကင်းဒဂုံဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းကမာရွတ်အင်းစိန်လှိုင်လှိုင်သာယာမရမ်းကုန်းမင်္ဂလာဒုံမြောက်ဥက္ကလာပတောင်ဥက္ကလာပသင်္ဃန်းကျွန်းသာကေတသံလျင်ဒလဒေါပုံမှော်ဘီလှည်းကူးထန်းတပင်ကော့မှူးခရမ်းကွမ်းခြံကုန်းရွှေပြည်သာတိုက်ကြီးသုံးခွတွံ့တေးကျောက်တန်းဆိပ်ကြီးခနောင်တိုပုလဲမြို့သစ်
ကမာရွတ်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3.05 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
🏢 SPTမှ​.​​ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာအနီးအမြန်ငှားမည်👍
ရန်ကင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
5 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
🏢 SPTမှ​.​​ ရွှေအုန်းပင်အိမ်ရာအနီးအမြန်ငှားမည်👍 ရန်ကင်းမြို့နယ် ‌ ‌💙(970)Sqft 2F, 3BR, ပါကေးခင်း 💚 Good Location ‌💚 ရှားပါးနေရာကောင်းလေး ‌📌✅လူနေထိုင်ရန်ကောင်း. ‌💚 ​ရေမီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့် ‌💵...
စမ်းချောင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
စမ်းချောင်းဇလွန်လမ်းတွင် အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်း လေးငှားချင်ပါတယ်။ ငါးထပ်တိုက်ရဲ့ဒုတိယထပ် သုံးလွာတွင်ရှိပြီး ဗဟိုလမ်းဂွဈေးတို့နှင့်အလွန်နီးပါတယ်။ အကျယ် ၁၂ ပေခွဲ အရှည်...
$ 250 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
အိမိငှာမည်။ တစ်လ ၃သိန်း၅သောင်း ၃လှွာ ဝါခယ်မလမိး၊ စမ်း​ချောင်းမြိုနယ်၊ ပရိ​ဘောဂအပါအဝင်၊ ဝရန်တာ၊ ပြတင်း​ပေါက်သံပနိးတပ်ဆင်ထားသည်။ကိုရီးယားပါ​ကေးခင်း၊...
မြောက်ဥက္ကလာပ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | လုံးချင်းအိမ်
#အိမ်ငှားမည်🏡🏡🏡 (#Code001 အ/ငှါး) 📌 ဉဇွာနာ လမ်းသွယ် / ကားဂိတ်နီး 📌 လမ်းသန့် / နေရာကောင်း/ 20x60 📌 ကားပါ အိမ်ထဲ့ထိ ရ / လျှာထိုးခင်း/ ဘိုထိုင်အိမ်သာ 📌 အခန်းဖွဲပါ / လစာ 200000/ (နှစ် သိန်း ကျပ် )ဖြင့် 📌 (6) ...
လှိုင်မြို့နယ် အင်းစိန်လမ်းမပေါ် တိုက်ခန်းငှားမည်
လှိုင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2.80 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
လှိုင်မြို့နယ် အင်းစိန်လမ်းမပေါ် သုခမှတ်တိုင်အနီး <br /> ဈေးနီး ကျောင်းနီး <br /> ပထမထပ်တိုက်ခန်းကျယ် ငှားမည်<br /> ရုံးခန်းဖွင့်ရန်တွက်<br /> လူနေရန် တွက် အဆင်ပြေပါသည်
ဧရာခ်မ္းသာ ကြန္ဒို - ျပင္ဆင္ပီးသား - ငွားမည္ ။
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
4.50 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | ကွန်ဒို
🙏 #AYCT_Condo_ျပင္ဆင္ပီးအခန္းသန္႔သန္႔ေလး_ေစ်းနွုန္းတန္တန္ေလး_ငွားမည္🙏 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 🔸 ဒဂုံဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္ ။ 🔸 ဧရာ၀ဏ္လမ္းမျကီးေပၚ 🔸 650 Sqft 🔸 13 Floor 🔸2- SBR / AC -3/ Fully Furnished / Lift / Car Parking / Security / Generator / Swimming Pool /...
လသာ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
#လသာ #အဌား #ဟောင်ကောင်7/8 #စျေးညှိနှိုင်း
1 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | စက်မှုဇုန်
Dagon Seikkan Township Industrial Zone Warehouse For Rent Land Area - 0.4 Acre Warehouse Area - 160*200 Toilet - 14 400 KVA Transformer Rental fee - 1 Sqft 380 ks Code..7338
သာကေတ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2 သိန်း (ကျပ်) (တစ္လ) | တိုက်ခန်း
တိုက်ခန်းငှားမည် 4လွှာ သာကေတမြို့နယ် ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်၊ ၆ လချုပ် (အကျိုးဆောင်လည်း လက်ခံပါသည်။ အငှားတိုက်ရိုက်ဆိုလျှင် အကျိုးဆောင်ခလျှော့ပေးမည်။) တည်နေရာ။ ။...
အလုံ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
550 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
အလွှာ​နိမ့် ကမ်းနားလမ်းမကြီးပေါ်တွင် သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် နေလိုသူများအတွက် အထူးစျေးနှုန်းဖြင့် ပိုလျှံနေသော ကျွန်ုပ်၏ တိုက်ခန်းအား ရောင်းချပေးလိုပါသည်။ အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး လူနေထိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် အချိန်မရွေး ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်နိုင်ပြီး၊ ဒေါင့်အခန်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းခြင်း၊ အလင်းရောင်ကောင်းခြင်း၊ ဆန်းရှိုတ်များ တပ်ဆင်ထားရှိခြင်း၊ ဧည့်ခန်းနှင့် အိပ်ခန်း ကြမ်းခင်းမှအပ တအိမ်လုံး ကြွေပြားကပ်ထားသဖြင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရလွယ်ကူခြင်း (နံရံအပါ)၊ လမ်းမတော်...
Owner Book လက်ဝယ်ရှိပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ညှိနှိုင်းစျေးဖြင့် ရောင်းမည်။ (၁၀၀% ဘဏ်လွှဲငွေပေးချေမှုလက်ခံပါတယ်)...
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
620 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ဗိုလ်ဘထူးအိမ်ရာအပိုင်း ၂။ ဗိုလ်မှူးဘထူးလမ်းမကြီးနဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး လမ်းဒေါင့်။ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ် အခန်းအတင်။ Owner Book လက်ဝယ်ရှိပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည်။ ပထမထပ်၊ ဒေါင့်ဆုံးတိုက် ဒေါင့်ဆုံးအခန်း။ လမ်းမပေါ် ၃၆၀ ပတ်လည် မြင်ကွင်းရှိတဲ့ ရှားပါးအခန်း။ 600 square feet အပြည့်။ ကွန်ကရစ်ဖွဲ့ အိပ်ခန်း ၂ ခန်း (ဝရန်တာကိုယ်စီပါ) အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီး အထုတ်ဆွဲလာနေရုံ။ ကားပါကင်၊ ၂...
🏠 #ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အရောင်း လှိုင်မြို့နယ်၊ သံလမ်းသွယ်(ကားဝင်လို့ရ)၊ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေတိုက်ခန်း 🔹#မြေညီထပ်၊ 🔸12 ပေခွဲ 55 ပေ 🔹470...
470 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
🏠 #ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အရောင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစည်ကားဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ လှိုင်မြို့နယ်၊ သံလမ်းသွယ်(ကားဝင်လို့ရ)၊ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေတိုက်ခန်း 🔹#မြေညီထပ်၊ 🔸12 ပေခွဲ 55 ပေ 🔹470 သိန်း (ညှိနှိုင်း) 🔸မြောက်ဘက်လှည့် 🔹စည်ပင်ခွင့်ပြုမိန့် (ဘုတ်စိမ်း)ဖြင့်ဆောက်ထား သံပန်းဆန်းရှိတ်များတပ်ဆင်ထားပါသည်၊ ခန်းဆီးလိုက်ကာ၊ ဆိုဖာဆက်တီ တစုံနှင့် အဝတ်ဘီဒိုများကိုလဲ လက်ဆောင်အဖြစ် ထဲ့ပေးထားပါသည်၊ တအိမ်လုံးပါကေးခင်း၊ အိမ်ရှေ့ဝင်ပေါက် မီးဖိုခန်း အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ကြွေပြားအပြည့်ခင်း၊နောက်ဘက်မြေပိုတွင် အခ...
200 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
ကျောင်းနီး၊ စျေးနီး၊ ကားမှတ်တိုင်နီး၊ City Mark နီး၊ တိုက်သစ်၊ ဆေးသစ်၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်မော်တာ၊ သံပန်း၊ ဆန်းရှိတ်၊ ဘိုထိုင်၊ မီးဖိုခုံ၊ အုတ်ကန်၊ အပေါ်ရေစည်၊ ရေခဲသေတ္တာ အ​ကြီး ၊ ထမင်း စားစားပွဲ ၆​ ယောက်ထိုင်၊ ေခါက် ဒါန်းလော့၊ စားပွဲခုံ၊ ကုတင်၊ မီးအားမြှင့်စက် အပါ တိုက်ခန်းအ​မြန်ရောင်းမည်။...
ဗိုလ်တထောင်	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
840 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
ရောင်းမည် (840သိန်း) ဗိုလ်တထောင် (၅၁)လမ်း ကွန်ဒိုအရောင်း အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း Ac နှစ်လုံး ဘိုထိုင် ရေပူရေအေး ကိုယ်ပိုင်မီတာ ပါကေးခင်းပီး မီးဖိုဘက်ခြမ်းကြွေပြားခင်းပီး အကျယ် 20x30 (600sqft) ဈေးနီး ကျောင်းနီး မှတ်တိုင်နီး Car parking ✅ Lift ✅ စာရွက်စာတမ်းအစုံအလင် အရှုပ်အရှင်းကင်းတဲ့ အခန်းလေးပါ Price 840 (Negotiate) Viberဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးပါရန် -Contact-Viber+959944052224 📦Messenger- Chat Box-အိမ်ရှင်များ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အပ်နှံနိုင်ပါသည်...
တာမွေ	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
နေပြည်တော် ရာဇဌာနီလမ်းတလမ်းကျော် ၆၀×၄၀ ဂရမ်ပေါက် မြေကွက်နှင့် ဘန်ဂလို သိန်း ၉၅၀
ပျဉ်းမနား	| နေပြည်တော်
950 သိန်း (ကျပ်) | လုံးချင်းအိမ်
🏠နေပြည်တော် ရာဇဌာနီလမ်းတလမ်းကျော် ၆၀×၄၀ ဂရမ်ပေါက် မြေကွက်နှင့် ဘန်ဂလို သိန်း ၉၅၀ @@@@@@@@@@@@@@@@ နေပြည်တော်၊ ရာဇဌာနီလမ်းအနီး မြင့်မိုရ်နန်းဟိုတယ်နောက်ဘက် အနီး ဆည်မြောင်းဝင်းမျက်နှာချင်းဆိုင် 🚗🚙Ford Nay pyi Daw Showroom နောက်တည့်တည့် 🏡ခြံတွင်းမှနေ၍ ဥပါဿသန္တိဘုရား ဖူး၍ ရပါသည်။ ဘုရားသို့ လမ်းလျှောက်လျှင်လည်း ရပါသည် (၁၅ မိနစ်မျှသာ) CB ဘဏ်၊ ရောင်ခြည်စတိုးဆိုင်၊ သီရိသုခဆေးရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် နီ...
ပြင်ဦးလွင်	| မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
60 သိန်း (ကျပ်) | မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
ပြင်ဦးလွင်ပွဲကောက်(ပွေးကောက်) ရေတံခွန်အနီး၊ ပွေးကောက်ကျေးရွာတွင်ရှိသောကြောင့်အနားသွားယူလိုသူများအတွက်အထူးသင့်တော််သည် ကွန်ကရ...
မရမ်းကုန်း	| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
280 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
တိုက်ခန်းရောင်းရန် တည်နေရာ - မရမ်းကုန်းမြို့နယ် သမိုင်းလမ်းဆုံ တစ်မှတ်တိုင် ကျိုက်၀ိုင်းဘုရားလမ်းမပေါ် အနီးတ၀ိုက် - ကျိုက်၀ိုင်းဘုရား ၊ သမိုင်းလမ်းဆုံ city mart ၊ ကျိုက်၀ိုင်းစျေး၊ ခ၀ဲခြံစျေး -	လမ်းထိပ် တွင် AYA BANK ၊ KBZ BANK -	၈ မိုင်လမ်းဆုံ ၊ လှိုင်သာယာ ၊ မြို့ထဲ ၊ အင်းစိန် လွယ်ကူစွာ သွားနိုင် ။ ဖွဲ့စည်းပုံ -	၁၁.၅ပေ ၄၅ပေ - ပထမထပ်	ဘေးအထပ် မြင့်မရှိ။ အိမ်ရှေ့ အိမ်နောက် ဘေး လေ၀င်လေထွက်ရှိ။ အခန်း ၂ ခန်း။ မီးဖိုဆောင် ၊ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ ကြွေပြားကပ် ။ အိမ် ကြမ်းခင်း လျှာထိုးခင်း။ ...
450 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
Ground Floor Area 20×25 Can adjust price